လူသားအားလုံးအတွက်: ဆောရီးပဲ ညီမလေး .
Posted by မိုးယံ at 10:53 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အရမ်းကိုခံစားရတဲ့ကဗျာလေးဘဲ။ ဖတ်ပြီးဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး.. ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီး...
ဖတ်ဖူးတယ်။ ကြိုက်လို့ အစအဆုံး ထပ်ဖတ်သွားတယ်။
“မာဆိုး”ဆိုတာ “မိုးယံ” လားဟင်-မသိလို့မေးခြင်းရယ်ပါ-
အမေ... အမြန်ကယ်ပေးပါနော်။အဲ့ဒါ အဖေကြောင့် !
ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ပါ တစ်ချို့ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကြောင့်ပါဆို
တာတွေပါပြောကြသေးတယ် မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပါ။
ကြိုက်တယ်ဗျာအကို အကိုရဲ့ကဗျာလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်အဓိပ္ပါယ်၇ှိတယ် အားရတယ်ဘယ်ကနေစပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လဲအသိလေးတွေရျိစေချင်ပါဓါဏ်ရာမကျံခဲ့ပေမဲ့ရှက်တက်ရင်သေလိုရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေလဲကို.ကိုယ်မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်မြင်ရတွေရတာတော့စိတ်ထဲတော့တမျိုပဲပေါ့
ဘယ်သူ့ ကိုမှ အပြစ်တင်ရမလဲဆိုရင် ကိုယ့်ကို
မစောင့်ထိန်းလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ခုလို ဖြစ်ပျက်နေ
တာကို ကျနော်လဲမကြိုက်ဘူး။နငယ်တကောင်က ရွှေ
မတကောင်နဲ့ ညားနေတယ်။ဟေး...i love u .i want slp together လို့ စတယ် ok no prblm
လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့..ကျနော့် နငယ်က ပြန်ပြောတယ် ။ မင်းတို့ မြန်မာတွေ အဲလိုပြောလို့ ရတယ်တဲ့။မရဘူး မင်းထင်တာမှားတယ် လူတိုင်းမရဘူး မင်းသူငယ်ချင်းကြိုက်တာ -ာပဲ
ဖြစ်ရမယ်လို့ စိတ်ပေါက်၂နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။မလေးမှာ မိန်းကလေးတွေ အများကြီး ပျက်စီးနေကြတယ် ။ မြန်မာပြည်ကမိဘတွေကိုလဲ သိစေချင်တယ်။ပိုက်ဆံရတာမြင်ပြီး ကိုယ့်သမီး -ာလို ဖြစ်နေတာ သူတို့ မသိကြဘူး။ကိုယ့်လူမျိုးတွေနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွဲတိုင်း ရင်နာတယ်။စိတ်မကောင်းဘူး။ငါတို့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ လိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်လို့ အစကကြွားထားသမျတော့ အရှက်တောင်ရစေတယ်သူငယ်ချင်းတို့ ရေ...အလုပ်ပိတ်ရက်တရက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသွားကြိုတာ သူ့ စက်ရုံက ကောင်မလေးတွေ အများကြီးတွေ့ တယ် ..သူတို့ ဘဲတွေဆီသွားအိပ်ကြတာတဲ့ဗျာ။အုပ်စုလိုက်ကြီးတွေ့ နေလိုက်ကြတာ ။အဓိက ကတော့ မိန်းကလေးတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရတော့မယ် မစောင့်ထိန်းလို့ ပေါ့။ကျား ဆိုတာက အကုန်ဝါးချင်နေကြတာ။အပြစ်မပြောနဲ့ ။သူတို့ ကမှ အ၀ါးခံချင်နေမှတော့ .....ပြောစရာမရှိပေါ့
မားဆိုး ဆိုတာ မိုးယံ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ....။ သေချာ ရှင်းပြရရင်တော့ မားဆိုး ဆိုတာ...“ မားဆိုး” ဆိုတဲ့ (မိုးယံမသိတဲ့) တစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ..
မိုးယံ- ကိုယ်တိုင်ရေးတာတွေလည်း တင်ဦးဗျ။ ကဗျာကို ကြိုက်တယ်။ Facebook အကြောင်းရေးထားတာလည်း ကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အထင် လူတွေဟာ အမှန်တစ်ခုရဲ့ နောက်မှာ အားလုံးရပ်နေကြလို့ထင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အကြိုက်တွေ တူနေတတ်တယ်။
Phu Lay said...
အရမ်းကောင်းပါတယ် မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ပါပဲ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို့ ဆင်ချင်သင့်တဲ့ လုိ့ထင်ပါတယ် မြန်မာမိန်းကလေးမှန်ရင်ပေါ့